မင်နီရှဲလ် - The Key To Immorality - MoeMaKa Media
Home / Community / Experience / Mini Shell / မင်နီရှဲလ် - The Key To Immorality
မင်နီရှဲလ် - The Key To Immorality
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၉
စာရေးသူမှာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူများတွေနည်းတူ ဘုရားမှန်မှန်သွား ၊ ဆွမ်းကပ် ၊ ဘုရားစာရွတ် စသည့် အလုပ်များနှင့် အမြဲရင်းနှီးခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း သေသေချာချာ နားလည်အောင်ကြိုးစား အားထုတ်ဖြစ်တာတော့ အမေရိကားရောက်မှ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာကြတာ တရားကို ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်ကြ ၊ ဒီကိုပြန်လာပြီး ရိပ်သာတွေ ဘာတွေ တည်ထောင်ကြတာ အကြောင်းတော့ရှိရမည် ဟုထင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ‌တွင် 'သိအောင်' လုပ်ရန်သိပ်အရေးကြီးသည် ဟုထင်ပါသည်။ ဘုရားသည် ကယ်မ မည့်သူမဟုတ်ပါ။ ကယ်မအောင် စောင့်နေစရာ လည်းမလိုပါ ၊ သေချာစ‌ဉ်းစားကြည့်ရင် စာမေးပွဲအောင်ဖို့ က်ုယ့်ဘာသာ စာဖတ်ရပါသည်။ ဆုတောင်းရုံ နှင့်မရပါ။ မိသားစုတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ကို အားကိုးလို့မရပါ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ကိုယ်တိုင်ရပါသည်။
လူတွေ့ဟာ ဂျင်းထည့်ခံရတာကို မကြိုက်ကြပါ။ အလိမ်မခံချင်ကြပါ ၊ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလိမ်ခံရရင် ငွေက ပြန်အစားထိုး လို့ရသေးသည်။ ပစ္စည်းတွေ ၊ သိက္ခာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျင်းအထည့်ခံရရင် လည်း တသက်တာပဲ နစ်နာပါသည်။
လောကမှာ အဆင်ပြေသူက ရှားသည်။ အဆင်မ‌ပြေသူ ၊ ဆင်းရဲသူ ၊ ရုပ်ဆိုးသူက ပေါသည်။ ဘုရားက ဆုတောင်းတိုင်း ကယ်မရင် အဆင်ပြေသူတွေ သာဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အဆင်မပြေသူ ၊ ကံဆိုးသူတွေကိုရော ဘုရားက မကယ်ဘူးလား ၊ မျက်နှာလိုက်သလားမေးတော့ ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာ ကျေနပ်လောက်အောင် မဖြေနိုင်ကြပါ။ မယုံမရှိပါနှင့် ။ ကျွန်မ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ထုတ်မေးဖူးပါသည်။
ဗုဒ္ဓ မှာ အားလုံးကို သိသူ ဆရာတစ်ဆူသာဖြစ်သည်။ ကယ်မမည့်သူ မဟုတ်ပါ။
What is good? ဘာကောင်းသလဲလို့ မေးရင်လူတိုင်းမှာ အ‌‌ဖြေတစ်မျိုးစီ ရှိကြမည်။လူချင်းမတူလို့ အကြိုက်ချင်းမတူကြပါ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ကတော့ ‌'‌လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လုပ်ခြင်း' မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လေသည်။
ဗုဒ္ဓတွင် အခြားသောဘုရားများ ၊ လူများနှင့် မတူညီသောအချက်မှာ ပညာနှင့် အကြင်နာ သူမတူအောင်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒသည် အတ္တကို ဆန့်ကျင်သော ၊ တစ်ခုတည်းသောဝါဒ ဖြစ်သည်။ 'ငါ'မရှိ ၊ 'သူ' မရှိ၊ အတ္တမရှိပါ ။
ကျွန်မ သေချာစဉ်းစားမိသည်မှာ အချိန်အကြောင်းကို တရားနာရသောအခါမှာ ဖြစ်သည်။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ အတိတ်နှင့် အနာဂတ်မှာပဲ အနေများကြသည်။ပစ္စုပ္ပန် မှာမရှိကြပေ။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့အလိုအရ ပစ္စုပ္ပန် မှာပဲ Mindful ဖြစ်ရမှာပါ။ အတွေးများမရှိပါနှင့်တော့ ၊ အသိပဲရှိပါစေ။
Thoughts တွေမရှိစေနှင့်တော့ ၊ No thoughts . Thinker လည်းမရှိပါ။ 'ငါ' မရှိပါ။ Thinking ရှိရင်လည်း Thinking ကိုသိနေပါစေ။ မြင်တာ ကြားတာတွေ အကုန်ကို သိနေပါ။ အချိန်ပြည့် 24/7 သိနေရမှာ ကိုပြောတာနော်။
ပြောရတာတော့လွယ်သည်။ လုပ်ရတာ အရမ်းခက်သည်။ 'တွေး' နေတာကိုမတွေး ရဘူးဆိုတော့ ပြဿနာပေါ့။ ငါးတစ်ကောင်ကုန်းပေါ် ရောက်နေသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ 'တွေး' တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်း 'ငါ' (အတ္တ) လို့ ထင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
တရားထိုင်ခြင်း (တစ်နည်းပြောရရင်) အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကျောက်ရုပ်ကြီး ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။ မိသားစုအပေါ် ချစ်သူ ၊ ခင်သူတွေအပေါ် စိမ်းကားသွားမှာ ၊ ပုံစံပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ သူတို့အပေါ်ထားသော ATTACHMENT နည်းသွားတာကလွဲလို့ ဘာမှ မပြောင်းလဲပါ ၊ စိတ်မှာ ဥယျာဉ်တစ်ခုလိုပင်ဖြစ်သည်။ အမြဲ ရှင်းလင်း ပေါင်းသင် ပေးနေရသည်။
ကျွန်မတို့ Vacation ယူသောအခါ ကိုယ်ခန္ဒာကို အနားပေးကြသည်။ သို့သော် စိတ်ကိုတော့ အနားမပေးကြပါ။ အာရုံကို နှိုးဆွသော ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ၊ Concert တွေ ၊ ခရီးတွေကို စီစဉ်ကြပါသည်။
အချို့ကလည်း အကျိုးလိုလို့ တရားထိုင်ကြသည်။ ဘာကြောင့်ပဲ ထိုင်ထိုင် ကောင်းတာပါပဲ ၊ တရား၏ အရသာကို လက်တွေ့ သိသွားရင် လိုချင်စိတ်တွေ သူ့အလိုလို လျော့သွားပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အလွန်ကြည်ညိုလာတာ အဲ့ဒါကြောင့်ပါ။
အရှေ့တိုင်းက နိုင်ငံဒေသ အချို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှေးမှိန်ခဲ့သော်လည်း အနောက်နိုင်ငံတွေ ထွန်းကားလာတာ ဝမ်းသာရမည်ဖြစ်သည်။ လောဘ ၊ ဒေါသ နည်းစေသော အရာဟာ လူတွေကို ကောင်းကျိုးပေးမှာ အမှန်ပင် ဖြစ်လေသည်။
လူဆိုးတွေ ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ကို တွေ့ကြုံဆုံရရင် သူ့မှာ လောဘ ၊ ဒေါသတွေ သိပ်ကြီးဆိုးနေပါလားဟု ကရုဏာစိတ် ဖြစ်ရပါသည်။ လူကို မမုန်းရပါ။ မေတ္တာကို အ‌ခြေခံထားပါသည်။
ကျွန်မမှာ ဘဝအတွေ့အကြုံ ဆူကြုံနိမ့်မြင့် မျိုးစုံ ကြုံဖူးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကံမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရသော လူများစွာတွေ့ဖူးသည်။ လောကရဲ့ ချမ်းသာ များစွာကို ခံစားဖူးသည်။ မူးယစ်ဆေးတော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးခဲ့။ အဆင်ပြေတာတွေ ၊ မပြေတာတွေ ရှိဖူးသည်။ ပညာတွေ အများကြီး သင်ဖူးသည်။ သို့သော် ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ရမလာပါ။ ဘဝ လုံခြုံမှုသာ ပေးပါသည်။ ငွေရှိခြင်းသည် စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် ဘာမှမဆိုင်ကြောင်း စာဖတ်သူတွေ သဘောပေါက်စေလိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနှင့် 'စိတ်' ကို Train လုပ်ကြည့်သင့်သည် ဟုထင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချိန်ပေါ ၊ ရိပ်သာပေါ ပါသည်။ သို့သော် စိတ်ကို train လုပ်သော အလုပ်မှာ လုံးဝမလွယ်ကူသောကြောင့် ကျွန်မဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်လိုပါ။ ကိုယ့်ဟာကို ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ပဲကြိုးစားပါအုန်းဟု စဉ်းစားမိပါသည်။ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေ ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရိပ်သာ ရောက်မလာနိုင်ခြင်းသည် ကျွန်မနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ ၊ ကျွန်မတို့သည် ရှည်လျားလှသော သံသရာကြီးထဲမှာ ခရီးသွားနေတုန်း ခဏ လာကြုံဆုံကြခြင်းသာဖြစ်သည်။
လောကတွင် လူ့ဘဝ ရရသည်မှာ ကံကောင်းလှပါ၏။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ကြုံရသည်မှာလည်း ကံကောင်းလှပါ၏ ၊ ထိုအထဲတွင်မှ ကျန်းမာခိုက်တွင် ဉာဏ်လည်းစဉ်ကို လိုက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရသည်မှာ ကံကောင်းလှပါ၏။ စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရနေတာလောက် ဘယ်ဟာမှကောင်းတာ မရှိပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တစ်ခုတည်းသော testable ဖြစ်သော (စစ်ဆေးခံရဲသော) ဘာသာဖြစ်ပါသည်။ Blind faith မဟုတ်ပါ ၊ Bright faith ၊ Verified faith ဖြစ်ပါသည်။ ဇွတ်အတင်းကြီး မယုံခိုင်းပါ။
တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ကို သူ့ယုံကြည်ချက်နှင့် စည်းစိမ်လဲဦးမလားဆိုရင် လဲတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ထိုအသိက Key To Immorality ဖြစ်လေသည်။ အဲ့ဒါကြောင့် လိမ္မာပါးနပ်သော ၊ တစ်နည်း ပါရမီပါသော နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာပြီး အကျိုးအမြတ် ရသွားကြောင်း သဘောပေါက်မိပါသည်။
ကျွန်မတို့တွင် ခန္ဒာကိုယ်ရှိနေသရွေ့ ဒုက္ခ ဆင်းရဲရှိနေအုန်းမည်။ သို့သော် အတ္တမရှိတော့လျှင် ရောဂါတွေဖိစီးတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ဆင်းရဲတော့မှာမဟုတ်ပါ။ လောဘ ၊ ဒေါသတွေ ဒီလောကမှာ များပြားလွန်းလှသည်။ သာမာန်ဆုတောင်းရုံ ၊ ကယ်မမှာစောင့်နေရုံနှင့် မရေမရာ ဖြစ်မနေပဲ စဉ်းစားခွင့် ၊ ဝေဖန်ခွင့်မေးခွန်း ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရသော ၊အသိဉာဏ်ပါသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရသည်မှာ ကံကောင်းလှပါသည်။ မယုံကြည်ရင် ကျန်တာတွေ အသာဖယ်ထားလိုက် ၊ ဖုန်းတွေ ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ၊ အသံတွေ အနှောင့်အယှက်တွေကို ဘေးဖယ်လိုက် ၊ ရိပ်သာခဏလောက် လက်တွေ့ကျကျ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ မမြဲသော သဘောကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ရင်လည်း တွေ့ရမှာပါပဲ။
လောကတွင် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ရင် အပြစ်ပေးခံရသည်။ ကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ချီးကျူးခံရသည်။ ထို့အတူ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်လုပ်နေသော အလုပ်တွေမှာ ကံတွေ ဖြစ်ကြသည်။ သူတောင်းစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မင်းသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူ့ဘဝ ရထားပြီမို့ တရားအားထုတ်နိုင်ခြင်းမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းမှာ ထိုအခွင့်အလမ်း ရှိသည်။ သီလမကောင်းလို့ ခွေးဘဝရောက်နေရင် ထိုအခွင့်အလမ်းမရှိတော့ပါ။ လူသားတိုင်း ကိုယ့်ကံကို ဖန်တီးယူနိုင်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓ ထားရစ်ခဲ့သော တရားဓမ္မများ၏ ကျေးဇူးကား အလွန်ပင်ကြီးမားလှပါသည်။
အထက်ပါဆောင်းပါးမှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်က ရေးခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ် ဩဂုတ်လထုတ် အပျိုစင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ နည်းနည်းပါးပါး ပြန်ပြင်ရေးထားတာရှိသော်လည်း များစွာ မပြင်ရပါ။။ ၁၃ နှစ်အချိန်အတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘာမှပြောင်းလဲသွားခဲ့တာမျိုး မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၃နှစ်အတွင်း ကျွန်မ ရိပ်သာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ရက် ၊ကိုးရက် ၊ တစ်ပတ် စသည် ၊ စနေ ‌၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက် ဝင်ဖြစ်တာကတော့ မရေမတွက်နိုင်တော့။ ဝင်ဖြစ်သောအကြိမ်တိုင်း အကျိုးရှိတာပါပဲ။
ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေ နည်းနည်းလာမယ်လို့ ထင်ပါသည်။ ထိုင်တိုင်းလည်း အဆင်ပြေတာမဟုတ်ပါ။ ခါးနာတာ ၊ အိပ်ချင်တာ ၊ ချောင်းဆိုးချင်တာ ၊ လူများတာကို မကြိုက်တာ ၊ ရိပ်သာကို မသွားပဲ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြချင်တာ ၊ တကယ်ကို အလုပ်များနေတာ တွေရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါသည်။ လွယ်သောအလုပ် မဟုတ်ပါ။ တကယ်ရောက်လာသူများမှာ ပါရမီရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုလိုက်ရောက်လာနိုင်သူ မရှိသလောက် အလွန်ရှားပါသည်။ ကိုယ့်မိသားစုကို အကောင်းဆုံးတွေ ပေးချင်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါမှာ သူတို့က လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါကိုလည်းကိုယ်က AT PEACE ဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးကို ထပ်အသက်သွင်းဖြစ်ခြင်းမှာ ဖတ်မိပြီး တွေးခေါ်မှုလေး တစ်ခုလောက် ဖြစ်စေချင်လို့ပါ ၊ ဒါဆိုရင်ရေးရကျိုးနပ်ပါသည်။ ကျွဲပါးစောင်းတီး တွေကပိုများမယ်ဆိုတာတော့ မလွဲမသွေ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အစက The Key to the Universe လို့‌ခေါင်းစဉ်ပေးမယ် လုပ်ပြီးကာမှ The Key to Immorality လို့ပေးလိုက်ပါသည်။ ဟိုတုန်းကရေးခဲ့သော ဆောင်းပါးကို ထပ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင် တရားထိုင်ဖို့မှာ သီလဖောင်ဒေးရှင်းရှိဖို့ ၊ ကျန်းမာဖို့ ယုံကြည်မှု နှင့် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ထပ်ဖြည့်ဖြစ်မှာပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးမှ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတာထက် ဒူးနာ ၊ ခါးနာ ၊ ရောဂါပေါင်းစုံ ရောက်မလာခင် ကြိုးစားကြည့်ဖို့ ထပ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
Nov 11th, 2019.
မင်နီရှဲလ် - The Key To Immorality Reviewed by MoeMaKa on 8:00 AM Rating: 5